Zahao ity Call to Action ity! | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 10, 2008 Talata, Oktobra 30, 2012 Douglas Karr
Raha mamaky an'ity hafatra ity amin'ny mailako na mailakao aho dia aza hadino ny manindry ny apetraho ny callout!
Iray amin'ireo fanamby ao amin'ny Indostrian'ny trano fisakafoanana dia miara-miasa amin'ireo olona tsy manam-potoana hitsapana ny varotra ataony na hilalao teknolojia matetika araka ny tokony ho izy. Soa ihany, ny talen'ny varotra, Marty Bird, dia manampy ireo mpanjifanay hamaky io elanelana io miaraka amin'ireo taratasim-bolana feno info
Tao amin'ny bilaoginay farany teo dia nilaza momba ny maha-zava-dehibe ny antso ho amin'ny hetsika i Marty. Raha manana pejy tokana ao amin'ny tranonkalanao ianao, na mailaka tokana mivoaka, tsy misy antso hihetsika - tena tsy azonao atao ny manova mpanjifa sasany.
Misy ny olona mieritreritra fa ny callouts dia cheesy tsotra fotsiny, saingy mandeha izy ireo. Miasa amin'ny ambaratonga maromaro izy ireo.
Antony 3 mahatonga ny fiantsoana hiasa:
ny fiasa izany - Raha noforonina tsara ny pejinao, tsy misy fanelingelenana kely, hisarika ny sain'ny mpanjifa ny callout - mazava ho azy ny toerana ahafahan'izy ireo manindry hivezivezy, misintona, misoratra anarana, sns. SATRIA tsy hain'izy ireo hoe aiza no tsindrio manaraka.
Options - Toy ny maha-zava-dehibe azy, matetika ny mpitsidika dia ho tonga amin'ny tranokalanao satria nidina tany izy ireo tamin'ny fikarohana, zava-dehibe ny manome azy ireo lalana hanohizan'ny fifandraisanareo. Mety efa hitan'izy ireo izay notadiaviny, fa ny manolotra azy ireo zavatra hafa mety hahatonga azy ireo hiverina!
te hahafanta-javatra - Misy isan-jaton'ny mpampiasa izay te-hanindry fotsiny ny entana. Afaka manome azy ireo lasibatra tadiavin'izy ireo ny fanomezana callout sahy tsara. Ho fanampin'izany, afaka mitondra varotra vaovao ho anao izy io.
Raha tsy ao anaty lisitra fanamarihanao ny antso ho amin'ny hetsika miaraka amin'ny callout sahy rehefa mamorona tranokala na mailaka ianao dia aza hadino ny manampy azy anio.
Manapa-kevitra momba ny vokatra, serivisy na endri-javatra vaovao
Jul 28, 2008 amin'ny 4: 49 AM
Torohevitra tsara. Mikasika ny lohahevitry ny atiny mailaka dia hitako ho tena loharanom-pahalalana mahasoa ity, miaraka amin'ny toro-hevitra sy lahatsoratra feno fahitana:
Jul 28, 2008 amin'ny 9: 36 AM
Nanampy an'io loharanom-pahalalana io tamin'ny Google Knol nosoratako tamin'ny Marketing amin'ny mailaka koa aho!